३ हजारमा यी महिलाले कसरी आफ्नो बनाइन् ५० करोडको घर? - Dainik Online Dainik Online
३ हजारमा यी महिलाले कसरी आफ्नो बनाइन् ५० करोडको घर?
प्रकाशित मिति : २७ चैत्र २०७८, आइतबार ८ : ०६
लण्डन। एक महिलाको भाग्य रातरात चम्किएको छ। उनी अचानक लगभग ५० करोड रुपैंया पर्ने सानदार घरको मालिक्नी बनेकी छिन्। त्यो पनि मात्र ३ हजार रुपैंयामा। यो खबर बेलायतको हो। हेल्थ डिपार्टमेन्टबाट रिटायर्ड ५९ बर्षीया ती महिला धाइआमा (फोस्टर मदर)का रुपमा अरुको घरमा काम गर्थिन्। फोस्टर भनेको अर्काको बच्चा पाल्नु।
ति महिलाको नाम कैथरीन कारवाडाइन हो। बेलायतको पब्लिक हेल्थ सर्भिसबाट अवकास पाएपछि उनले फोस्टर मदर बन्ने घोषणा गरिन्। उनका ५ छोरा छन्। कमजोर आर्थिकस्थितिका कारण उनले अरुको बच्चाको रेखदेखको काम गर्न थालिन्। हालै उनी करौडो पर्ने घरको मालिक बनेकी छन्।
२ हजारमा मिल्यो ५० करोडको घर
डेली मेलको रिपोर्ट अनुसार उनी आफ्ना पति क्रिस र ५ छोरासँग सानो घरमा बस्थिन्। गत भ्यालेन्टाइन डेमा उनले २० पाउन्ड (करिब ३ हजार रुपैया) मा रिफल लट्रिको टिकट किनिन्। लट्रि ड्रबाट यसरी भाग्य चम्किएला भनेर उनले कल्पनै गरेकी थिइनन्। तर, हालै अप्रिलमा आएको नजिता अनुसार उनले ३ मिलियन पाउन्ड (लगभग ५० करोड)को एक सानदार घर जितेको खबर सुनिन् र उनका लागि खुसीको सिमा नै रहेन।
उनलाई सुरुमा त लागेको थियो कसैले फोन गरेर अप्रिल फुल मनाई रहेको छ। तर,पछि सोधखोज गर्दा लट्रि जितेको कुरा सत्य सावित भयो। चिठ्ठा कम्पनीले ती दम्पतीलाई फोन गरेर चिठ्ठा परेको सुःखद खबर सुनाएका थिए। त्यो दिनको कुरा सम्झँदै महिला भन्छिन्, ‘यो खबर सुनेको रात खुशीले सुत्न सकेन।’
धेरै नै सानदार छ चिठ्ठाको घर
समाचारमा जनाइए अनुसार त्यो घर एक तलाको छ। त्यसमा थियेटर, जिम, गार्डन जस्ता सुविधाहरु समेत छन। घरको झ्यालबाट रमाइलो दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। त्यो घरमा आफै बस्ने वा भाडामा दिने अब ति महिलाको हातमा छ। हालै उनीहरुले परिवारको साथमा त्यो घरको निरिक्षण गरेका थिए। एजेन्सी
गोरखाका यी स्वतन्त्र उमेद्वार जसले अरुको १ मत पनि पाएनन्, आफ्नो भोट पनि कता हरायो!
पुरुषको यौनांग जस्तै फूल टिपेको भिडियो भाइरल भएपछि विरुवा नै लोप हुने चिन्ता!
विश्वकै सबैभन्दा दुःखी माछा भेटियो!
शौचालय जानुको अल्छीले डाइपर लगाउने श्रीमानमाथि श्रीमतीले हालिन् मुद्दा!